Momba anay - Foshan City Nanhai Yingjiwei Aluminium Building Materials Co., Ltd.
Foshan City Nanhai Yingjiwei Aluminium Building Materials Co., Ltd dia natsangana tamin'ny taona 2009, miorina ao Lishui Town, Distrikan'i Nanhai, Foshan City, Faritanin'i Guangdong, manodidina ny 20km avy amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Guangzhou Baiyun. Ny orinasanay dia manarona faritra mihoatra ny 80,000 metatra toradroa, izay tsy latsaky ny 200 ny mpiasa sy ny mpamorona efa za-draharaha 30. Nahay manokana izahay tamin'ny famokarana takelaka fanodinana alimina, takelaka tantely tantely sy valindrihana alim-pito izay misy karazana fitsaboana isan-karazany toy ny: firakotra PVDF / Fluorocarbon, firakotra vovoka, marbra sy voan-kazo vita amin'ny hazo, sary hosodoko ary UV sns. Matetika ny vovon-tsakay dia baikoina avy amin'ny orinasa Akzo Nobel malaza eran-tany, izay miantoka ny kalitaon'ny coating ny vokatray ho ambony sy mateza.
Misy andiana milina fanoratana 3, milina miondrika 14, milina fanaovana totohondry 8, milina fanaovana sokitra 12, 3 milina fanontam-pirinty UV ary milina fanapahana laser 2 ao amin'ny atrikasa ary nampidirina ny tsipika fandrakofana vovoka mandroso ho antsika avy any Japon. Ny vokatra isan-taona an'ny veneer aluminium dia manodidina ny 2.3 tapitrisa metatra toradroa.
Ny vokatray dia mankafy laza tsara ary be mpampiasa eto an-toerana sy any ivelany, mety amin'ny trano fandraisam-bahiny, hopitaly, trano fonenana, villa, gara, metro metro, toeram-pivarotana, biraon'ny birao ary trano fanaovana trano sns. Ireo tetik'asa nomenay dia ahitana: Guangzhou Baiyun Seranam-piaramanidina; Gymnasium Olaimpika Zhengzhou; Trano fampirantiana Canton Fair, Banky ara-barotra any Etiopia ary ny fitsarana nasionalin'i Singapore ...
Tongasoa amin-kafanam-po ireo namantsika sy mpanjifantsika avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao hitsidika ny fivarotanay. Hanao izay fara herinay izahay hanolotra anao ny serivisy vahaolana faran'izay avo lenta aluminium. Izay misy an'i Yingjiwei dia misy lalana.